नेपालमै पहिलो पटक व्यवसायिक साइलेज उत्पादन सुरु - कृषि डेली
Home अन्नवाली नेपालमै पहिलो पटक व्यवसायिक साइलेज उत्पादन सुरु
नेपालमै पहिलो पटक व्यवसायिक साइलेज उत्पादन सुरु
शिवम् न्युट्रिप्रो प्रा.लि. विरगंजले नेपालमै पहिलो पटक व्यवसायिक रुपमा साईलेजको उत्पादन शुरु गरेको छ । पश्चिमा मुलुकमा धेरै पहिलेदेखी नै प्रयोगमा आएको साइलेज नेपालमा भने कागज र कुरामा मात्र सिमित रहेको थियो । प्रा.लि. ले ६ महिना अगाडी देखि उत्पादन थालेर गरी अहिले बजारमा वितरण सुरु गरेको छ ।
साइलेज भनेको एनएरोविक वातावरणमा उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त घाँसलाई करिव एक देखि डेढ वर्षसम्म सुरक्षित राख्न मिल्ने गरी बनाइएको गाई वस्तुको भोजन हो । जसलाई ४० दिन राखिसकेपछि गाइवस्तुलाई खुवाउन सकिन्छ । साइलेज लामो समय सुरक्षित राखि हरियो घाँस उपलव्ध नभएको समयमा पशुवस्तुलाई खुवाउन मिल्ने भएकोले किसानका लागी कम खर्चिलो र गाईवस्तुलाइ सधै पोषिलो घाँस पुर्याउन मद्दत पुग्छ ।
साइलेजमा १२ देखि १६ प्रतिशतसम्म प्रोटिन हुन्छ भने प्रोपायोनिक एसिड, व्युटायरिक एसिड र ल्याक्टिक एसिड पनि प्रयाप्त मात्रामा हुन्छ । कम्पनीले अहिले परालको कुटीकै मुल्यमा मकैको साइलेज उत्पादन गरिरहेको छ र छिटै मुल्य घटाएर सहज र सुलभ रुपमा बजारमा बितरण गर्ने तयारीमा छ ।
Previous articleचितवनमा शुरु भयो इन्टरनेशनल पोल्ट्री सिम्पोजियम
Next articleकिसानलाई उखुले भन्दा केराले साथ दियो